Home Wararka (Faallo) MW Farmaajo “Ma kala jecla hadii Muqdisho lagu dagaalo oo...
(Faallo) MW Farmaajo “Ma kala jecla hadii Muqdisho lagu dagaalo oo aay burburto”
Ila wareed ku sugan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa MOL usheegay shir ay qabsadeen kooxda MW Farmaajo & qaar kamid ah Saraakiisha ciidamada , Xildhibaanada ku beel ah Madaxweyne Farmaajo ayaa walwal soo jeediyay ayago tusaaleenayaa xaalada uu dalka ku sugan yahay gaar ahaan muqdisho, kadib markii albaab kasto wadahadal ah aysoo xirmeen waqtigii doorashadana aysoo gabagaboowday.
MW Farmaajo ayaa si jees jees ah udhahay Maxaa iga gidhiis ah hadii muqdisho dagaalo ka dhacaan ma aabaheey ba ku buka. hadalkaas ayaa waxaa ka naxay inta masuul e fadhiday shirka cabaarna wala aamusay .
Mid kamid ah Generaal aan hada magaciisa haynin ayaa Madaxweynaha waydiiyay mudane M/weyne maati ayaa magaalada naga joogto dagaal sokeeye hadii uu dhacana dadkeena qasaaro waysoo gaarayaan ee maxaa qorsho uga hortagno na fareeysa.
M/w Farmaajo ayaa yiri nimankaan Hawiye xukun ayeey rabaan uma jeedaan dagaal sokeeye hadii dagaal dhacana meelaha u calamadeesan wa naqaana , qasaaraha dadkooda ayuu ku kooban yahay anigana waxaan caasimada si kumeel gaar ah u rarayaa Baydhabo arrintaasna waan iska fahanay Abdiasiis lafta gareen .
Madhiibayo kursiga , ilaa aan beesha uga fadhiisiyo Kursiga madaxweynaha Jubaland oo aan gacanteena soo galiyo,
Waa nasiib daro wayn kusoo korotay guud ahaan shacabka soomaaliyeed hadii Madaxweynaha uu qabyaalad ka buuxdo oo dhiiga shacabka kala fadilaayo , kursiga xafiiska madaxweynaha ugu adeeganayo dano qabiil.